Unity dia mahazo ilay orinasa Espaniola Códice Software | Avy amin'ny Linux
Unity dia mahazo ilay orinasa Espaniola Códice Software
Isaac | | About us, fandaharana
Unity Technologies, ilay mpamorona ny motera sary Unity 3D malaza (tsy tokony hafangaro Firaisankina Shell), dia nanao fisamborana nahaliana. Nividy tamin'ny ny orinasa Espaniola Códice Software. Saingy, tsy nisy antsipiriany fantatra momba ny habetsaky ny fahazoana azy io, noho izany dia tsy azo atao ny miresaka tarehimarika toa ny tranga hafa. Nivoitra fa efa nanomboka volana maro lasa izay ny fifampiresahana hahazoana fifanarahana eo amin'ireo orinasa roa ireo.
Ny fantatsika dia ny fividianana dia tsy midika fiovana ho an'ny vokatra Unity na ho an'ny ilay SCM Plastika malaza izay fantatry ny orinasa Códice Software. Raha tsy fantatrao izany dia rindrambaiko noforonina tao Valladolid izy ary ampiasaina ho fifehezana kinova (VCS), ho solon'ny hafa amin'ny Git.
Ity fahazoana ity dia hahafahan'ny Unity ahafahan'ny ekipa mpamorona lehibe manararaotra ny herin'io Sehatra VCS amin'ny tanindrazana hanohizana ny fanatsarana ny motera sary Unity 3D ho an'ny lalao video manaraka azy. Ary koa ny SCM Plastika dia hitombo miaraka amin'ny Unity, noho izany dia fifanarahana mahasoa izy roa tonta.
Raha ny fanazavana, efa manana sehatra mitovy amin'izany antsoina hoe Unity Technologies miara-miasa, fa tsy hisy fiovana ao aminy koa. Araka ny notaterin'ny orinasa natsangana tany Danemark (ary miorina ao amin'ny Silicon Valley) dia hanohy hanohana azy ihany koa izy ireo. Saingy natao hifehezana ekipa kely izy io, ary izao dia afaka mamela ny asa mifandrindra amin'ireo ekipa lehibe kokoa hahavita tetikasa sarotra kokoa ny Plastic SCM.
La Areti-mifindra SARS-CoV-2Mazava ho azy fa ny ampahany ihany koa no tompon'andraikitra amin'izany. Orinasa maro manova ny fomba fiasanao. Ary ankehitriny mihoatra ny taloha, nitombo ny fifandraisan-davitra. Noho io antony io dia ekipa maro no miasa lavitra, noho izany ny plastik SCM avy amin'ny Códice Software dia hanome fotoana tsara kokoa amin'ity tranga ity.
Misimisy kokoa momba ny firaisana
Fampahalalana bebe kokoa momba ny SCM Plastika
Fampahalalana misimisy kokoa momba ny Códice Software
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Unity dia mahazo ilay orinasa Espaniola Códice Software
Fluxbox, FLWM, FVWM, Haze, ary Herbstluftwm: WM hafa 5 ho an'ny Linux
Fijirihana sy Pentestana: Ampifanaraho amin'ity sehatra IT ity ny GNU / Linux Distro-nao